समाचार कडा सुरक्षाका बीच सर्लाही ४ को मतगणना जारी
Ujyaalo बुधवार, मंसिर २७, २०७४ ०२:४४:००
सर्लाही, मंसिर २६ –प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा मतगणना भैरहेको छ । आइतार रातिदेखि रोकिएको मतगणना मंगलबार बिहानदेखि कडा सुरक्षाका बीच सूरु भएको हो । बेलुका सम्ममा मतगणना सक्ने गरी गणना तीव्र रुपमा भैरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
मतगणना भैरहँदा ताजा अवस्थामा कांगे्रसका उम्मेदवार डा. अमरेशकुमार सिंह २३ हजार ८८ मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी राजपा नेपालका राकेशकुमार मिश्रले २१ हजार ८ सय ५६ मत प्राप्तगरि उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ । क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणना भैरहेको स्थान सर्लाही क्याम्पस मलंगवा बाहिर सोमबार दिउँसो राजपा र कांगे्रसका कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि व्यापाक मात्रामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।
जनता आधारभुत विद्यालय बलरा मतदान केन्द्रको एक मतपेटिकामा ६ मध्ये ४ वटा मात्रै सिल लगाएको भेटिएपछि दलका प्रतिनिधिहरुबीच विवाद हुँदा आइतवार रातिदेखि त्यस क्षेत्रको मतगणना रोकिएको थियो । सोमबार बिहान दलका प्रतिनिधिबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि पुन : मतगणना सूरु भएको हो ।